Duqa Muqdisho oo shaqo joojin ku sameeyay Waaxda Dhulalka ee Dowladda Hoose -
Home News Duqa Muqdisho oo shaqo joojin ku sameeyay Waaxda Dhulalka ee Dowladda Hoose
Duqa Muqdisho oo shaqo joojin ku sameeyay Waaxda Dhulalka ee Dowladda Hoose
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa shaqo joojin ku sameeyay dhaq-dhaqaaqyada Waaxda dhulalka ee Dowladda Hoose ee Xamar.
Wareegto kasoo baxday Xafiiska Guddoomiyaha Gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Finish ayaa lagu shaaciyay in lagu joojiyay dhammaan shaqadii iyo dhaq-dhaqaaqyadii Waaxda Maamulka Gobolka u qaabilsan dhulalka.
Afhayeenka Gobolka Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere oo warbaahinta u akhrinayay Wareegtada ayaa waxaa uu sheegay in Waaxda dhulalka ay cabasho iyo dhaliilo kala duwan kasoo gudbiyeen shacabka, isla markaana sidaas shaqada looga joojiyay.
Sidoo kale Afhayeenka Maamulka Gobolka Banaadir Saalax Dheere ayaa sheegay in Guddoomiye Cumar Finish uu Guddi baaritaan u saari doono cabashooyinka ay soo gudbiyeen dadweynaha iyo wararka Caasimadda dalka ee Muqdisho la isla dhexmaraayo oo ku aadan arrinta dhulalka.
Wareegtada shaqada looga joojiyay Waaxda Maamulka Gobolka u qaabilsan dhulalka ayaa waxaa la ogeysiiyay Madaxda ugu sarreysa dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa Maamulka Gobolka Banaadir.
Previous articleBritain first in Europe to meet the difficult milestone of 100,000 Covid-19 deaths
Next articleon TikTok, Russian youths beat Putin